Ogaden News Agency (ONA) – Jarmalka oo Dawlad-Wadaag Ah La Isku Afgartay.
Jarmalka oo Dawlad-Wadaag Ah La Isku Afgartay.
Xisbiyada Jarmalka ee ay wadahadalada dowlad-wadaag ah ay u socdeen ayaa ugu dambayn heshiis kaamil ah wadagaaray
Xisbiga Angela Merkel ee CDU iyo xisbiga kale ee SPD ayaa gaaray isafgaradan oo mudo dheer la iskumari la’aa. Waxaa lagu heshiiyey wasiiro la wadaagayo qodobkaasoo ahaa mid si weyn la isugu hayay mudo dheerna jiitamayay
Tilaabadani ayaa dhamaynaysa ismariwaa afar bilood soo jiitamayay ka dib markii ay dhacday doorasho cidna aysan ku guullaysan. Balse weli waxaa loo baahan yahay in heshiiskan ay ansaxiyaan xubnaha xisbiga SPD oo cod u qaadi doona heshiiskan
Angela Merkel oo heshiiskan ka hadashay ayaa sheegtay inuu yahay mid wanaagsan oo dowlad degan abuuraya. Xisbiga SPD ayaa yeellanaya lix wasiir oo ay ka mid yihiin arrimaha dibada iyo maaliyada. Hadii ay ogolaadaan heshiiskan xubnaha xisbiga SPD waxaa lagu dhawaaqi doonaa bisha Maarso labadeeda
Arrimaha sidoo kale hadheeyay wadahadaladan mudada socday waxaa ka mid ah arimaha shaqaalaha iyo qaxootiga soogalootiga ah.